Ny fitakiana fihenan-tsasatra dia miparitaka amin'ny sehatra indostrialy sy ara-barotra. Ny cooling dia mizara roa amin'ny ankapobeny:
Fangatsiahana dingana amin'ny indostria
Ity karazana fampangatsiahana ity dia ampiharina rehefa ilaina ny fanaraha-maso marina sy maharitra ny mari-pana ao anatin'ny dingana iray.
Anisan'izany ny faritra mangatsiaka
■ Fanamafisana mivantana ny vokatra
Plastika mandritra ny dingan'ny famolavolana
Vokatra vy mandritra ny milina
■ Fanamafisana dingana iray manokana
Fanamasinana labiera sy lager
Sambo fitondra simika
■ Fanamafisana ny masinina
Ny fizaran-tany sy ny boaty mihodina
Masinina manapaka sy laser
Ny chillers dia matetika ampiasaina mba hanesorana ny hafanana amin'ny fizotrany iray noho ny fahaizany manome fahafaha-mihena na inona na inona fiovana amin'ny mari-pana manodidina, ny enta-mavesatra ary ny fitakiana fikorianan'ny fampiharana.
Ny tilikambo fanamafisana SPL Closed Loop Cooling dia manatsara ny fahombiazan'ny vidin'ity rafitra ity
Fampangatsiahana / fanaraha-maso ny toetrandro
Io karazana haitao mangatsiaka io dia mifehy ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny habaka iray. Ny teknolojia dia mazàna amin'ny ankapobeny ary ampiasaina amin'ny efitrano fampangatsiahana, arimoara elektrika na toerana hafa izay tsy voatery ho marina sy maharitra ny fifehezana ny mari-pana. Tafiditra ao anatin'ity vondrona teknôlôjia ity ny unit aircon.
SPL Evaporative Condenser dia manatsara ny fahombiazan'ny vidin'ity rafitra ity
Antsoy ny ekipanay Sales mba hahatakatra bebe kokoa ny rafitra sy ny fampiharana azy.